के अमेरिकी सेना नेपाल आउनै लागेका हुन् त ? – Everest Times News
२०७९ जेष्ठ ३१, मंगलवार १४:४४
अमेरिकाले नेपालमा सैन्य सहकार्यका लागि प्रस्ताव गरेको सम्झौताको मस्यौदा सार्वजनिक भएपछि नेपालमा खैलाबैला मच्चिएको छ । केही दिनदेखि संसदमा प्रतिपक्षी नेताहरुले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको आसन्न भ्रमणलाई लिएर प्रश्न उठाइ रहेको बेला उक्त सम्झौताको मस्यौदा सार्वजनिक भएको हो ।
यसले एमसीसीको विरोध गरिरहेकाहरुलाई थप खुराक मिलेको छ । के अमेरिका नेपालमा अमेरिकी सेना ल्याउन चाहन्छ? चीनलाई ठेगान लगाउनका लागि अमेरिका आफ्नो सेनालाई तालिमको नाममा हिमाली क्षेत्रमा राख्न चाहन्छन्? यसले नेपालको भूराजनीतिक अबस्थालाई कस्तो असर पार्छ भन्ने सम्बन्धमा प्रश्नहरु उब्जिएका छन् ।
सरकार भित्रै रहेका र सरकारबाहिर रहेका राजनीतिक दलका नेताहरुले यो सम्झौताको बिरोध गरेका छन् । यसले अमेरिकी सेनालाई नेपाल आएर बस्न छुट दिने र नेपालमा असंलग्नताको सिद्धान्तमा असर पर्ने उनीहरुको बुझाइ रहेको छ ।
उनीहरुले प्रधानमन्त्री देउवाको भ्रमण यो सम्झौतामा हस्ताक्षरको लागि हुन लागेको आरोप लगाइएको छ ।
यस्तो सम्झौताको मस्यौदा